Uqoqo lweMpawu zoKhuseleko
Imiqondiso kunye neesimboli zokukhusela kunokunceda ukukhusela izingozi kwibhu. Ann Cutting / Getty Izithombe
IiLabhabhi zenzululwazi, ngokukodwa i-labistry labs, zinemiqondiso emininzi yokhuseleko. Le ngqokelela yemifanekiso yombutho woluntu ongayisebenzisa ukuze ufunde ukuba impawu ezahlukileyo zithetha ntoni okanye ukwakha iimpawu zebhan yakho.
Uphawu lweGreen Eyewash okanye Uphawu
Iibhendi zokuSebenza zoKhuseleko Sebenzisa le mqondiso ukubonisa indawo yesikhululo se-eyewash. Rafal Konieczny
Uphawu loKhuseleko oluGcini okanye uphawu
Lo ngumqondiso okanye isimboli sokuhlamba. Epop, Creative Commons
Iibhendi zokuSebenza zoKhuseleko Sebenzisa le simboli ukuchonga indawo yesikhululo sosizo lokuqala. Rafal Konieczny
Uphawu lweGreen Defibrillator Sign
Lo mqondiso ubonisa indawo ye-defibrillator okanye i-AED. Stefan-Xp, Creative Commons
Uphawu loKhuseleko lweMibhobho ebomvu
Uphawu lokhuseleko lubonisa indawo yengubo yomlilo. Epop, Creative Commons
ILab yoKhuseleko lweLabhuthi Eli fayili yomsakazo ngumncinci omncinci kunokuba uqhube umgangatho wakho, kodwa kulula ukuqonda ukubaluleka kwesimboli. Ianare, i-Wikipedia Commons
Isibonakaliso seTyhutyana esisisigxina - Uphawu loKhuseleko
Le ngqungquthela ibonakaliso lengozi yezinto ezinokutsha. Cary Bass
Uphawu oluBomvu lwe-Ionizing Radiation - Uphawu loKhuseleko
Le yimboli ye-IAEA yelumkiso yelanga (ISO 21482). I-Kricke (i-Wikipedia) esekelwe kwimiqondiso ye-IAEA.
Isimboli sokuKhuseliswa kweGreen
ULab loKhuseleko Ubonisa uphawu lwe-Universal usetyenziso okanye uphawu. Cbuckley, i-Wikipedia Commons
I-Orange Toxic - Uphawu loKhuseleko
Le yimbophu yengozi yezinto ezinobuthi. IYurophu yeCrother Chemicals
I-Orange Inobungozi okanye Uphawu olubi
Le yimboli yengozi ye-irritant okanye uphawu oluqhelekileyo lweekhemikhali ezinobungozi. IYurophu yeCrother Chemicals
I-Orange enokutsha - Uphawu loKhuseleko
Le yimbophu yengozi yezinto ezinokutsha. IYurophu yeCrother Chemicals
Iimveliso ze-Orange - Uphawu loKhuseleko
Le yimbophu yengozi yeziqhushumbisi okanye ingozi yokuqhuma. IYurophu yeCrother Chemicals
I-Orange Oxidizing - Uphawu loKhuseleko
Le yimboyi yengozi yezinto ezixhamlayo. IYurophu yeCrother Chemicals
I-Orange Corrosive - Uphawu loKhuseleko
Le yimbozi yengozi ebonisa izinto ezihlaselayo. IYurophu yeCrother Chemicals
Ingozi ye-Orange Environmental - Uphawu loKhuseleko
Lo ngumqondiso wokhuseleko obonisa ingozi yendalo. IYurophu yeCrother Chemicals
I-Blue Respiratory Protection Sign - Uphawu loKhuseleko
ULab lweZiko loKhuseleko Lo mqondiso uxelela ukhuseleko lokuphefumula olufunekayo. Torsten Henning
Iiglovu zeBlue Gloves efunekayo Uphawu - Uphawu loKhuseleko
ULabhanzo lweLab loKhuseleko Lo mqondiso uthetha ukuba ufuna ukugqoka iiglavu okanye esinye isikhuselo sandla. Torsten Henning
Uphawu lweBlue Eye okanye iNkcukacha yoKhuselo loBuso - Uphawu loKhuseleko
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isalathisi sibonisa isohlo okanye ukukhusela ubuso. Torsten Henning
Uphawu lweMpahla yokuVikela eBlue
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isimboli sibonisa ukusetyenziswa okusemthethweni kwempahla yokukhusela. Torsten Henning
I-Blue Protective Footwear Sign
ULabhanzo lweLab loKhuseleko Lo mqondiso ubonisa ukusetyenziswa okusemthethweni kwezihlangu ezikhuselayo. Torsten Henning
I-Blue Eye Protection Isibonakaliso esifunekayo
Lo mqondiso okanye isimboli kuthetha ukuba ukukhuselwa kwamehlo okufanelekileyo kufuneka kugqitywe. Torsten Henning
Isikhuselo seNtlu yeBlue eBlulekayo
Oluphawu okanye uphawu lubonisa ukukhuselwa kwindlebe. Torsten Henning
Uphawu oluBomvu nolumnyama
ULabhu loKhuseleko uphawu Lona uphawu olungenanto ngaphandle kokuba ungalondoloza okanye uprinte. RTCNCA, i-Wikipedia Creative Commons
Uphawu oluNgcono nolumnyama
ULebhu lwezoKhuseleko Lona uphawu olungabalulekanga olungagcina okanye ukuprinta. RTCNCA, i-Wikipedia Creative Commons
Umqondiso wokuCima Umlilo oMvulo noMhlophe
Iibhodi zoKhuseleko lweLab Isimboli okanye uphawu lubonisa indawo yokucima umlilo. Moogle10000, i-Wikipedia Commons
Uphawu loKhuseleko lweHolo loMlilo
Uphawu lokhuseleko lubonisa indawo yombhobho womlilo. Epop, Creative Commons
Isimboli seGesi esinokutsha
Le ipasitidi ebonisa igesi elivuthayo. I-HAZMAT Iklasi 2.1: Igesi elivuthayo. Nickersonl, i-Wikipedia Commons
Igesi elivuthayo eliya kutshabalalisa ngokuqhagamshelana nomthombo wokutshisa. Imizekelo ibandakanya i-hydrogen kunye ne-acetylene.
Le yimboli yengozi yegesi engenakutsha. IHazmat Class 2.2: Gesi engenakutsha. Iigesi ezingenakungenakutshabalaliseka aziyikutsha okanye zinobuhlungu. "Incwadi Yesikhokelo Yokuphendula Ngokukhawuleza." Isebe lezothutho le-US, 2004, iphepha 16-17.
Uphawu lweSikhali seSikhali
ULab loKhuseleko lubonisa uphawu lwe-US Army yezixhobo zamakhemikhali. Ibutho lase-US
Isixhobo sesigqabi seBilo
ULabhanzo lwezoKhuseleko Lo ngumqondiso we-Army wase-US kwisixhobo sezinto eziphilayo zokutshabalalisa okanye ukutshabalalisa i-WMD. Andux, i-Wikipedia Commons. Uyilo lwakwa-Army yase-US.
Isixhobo seNyukliya yeSixhobo
Iibhodi zoKhuseleko kwiLeb Isimboli saseMelika se-WMD okanye isikhali senyukliya. Ysangkok, i-Wikipedia Commons. Uyilo lwakwa-Army yase-US.
Uphawu lweCarcinogen Ingozi
Iimpawu zoKhuseleko lweLeb Yiyo yoNxibelelwano lweNkqubo yeZizwe eziManyeneyo kwiLizwe eliManyeneyo kwii-carcinogens, mutagens, teratogens, i-sensitizers zokuphefumula kunye nezinto ezijongene nobutywala bequmrhu. amazwe adbeneyo
Isibonakaliso sokuThuthukiswa kweTekisi ephantsi
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isimboli ibonisa ubukho beqondo eliphantsi okanye ingozi ye-cryogenic. Torsten Henning
Isilumkiso esilumkiso esiseshushu
Iibhodi zoKhuseleko kwiLab Isilumkiso esilumkiso esibonisa indawo eshushu. Torsten Henning
IMagnetic Field Symbol
Iibhodi zoKhuseleko kwiLeb Isimboli sokulumkisa esibonisa ubukho bemandla endala. Torsten Henning
Uphawu loMbane lweMpawu
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isalathisi sibonisa ubukho bengozi yokukhanya kwemitha. Torsten Henning
Uphawu lweLayer Warning
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isalathisi silumkisa ngomngcipheko wokubhenca kwiimitha zamatye okanye i-radiation ehambelanayo. Torsten Henning
Uphawu lweGesi oluxinyiweyo
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isalathisi silumkisa malunga nobukho begesi. Torsten Henning
I-Symbol ye-Radiation Symbol
ULabhanzo lwezoKhuseleko Lona uphawu lokulumkisa kwimimiselo engabonakaliyo. Torsten Henning
Isilumkiso Sesiqhelo Esiqhelekileyo
ULabhu lweZokhuseleko loLo luphawu lwesilumkiso esiqhelekileyo. Ungayigcina okanye uyiprinte ukuze isetyenziswe njengomqondiso. Torsten Henning
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isilumkiso somlingo we-radiation yengozi ye-radiation. Torsten Henning
Izixhobo zoLawulo loKhuseleko
ULab lweZiko loKhuseleko Lo mqondiso uxwayisa ngeengozi ezivela kwizixhobo eziqaliswe kude. Torsten Henning
Uphawu lwe Biohazard
ULab lweZiko loKhuseleko Uphawu olu lumkisa nge-biohazard. Bastique, i-Wikipedia Commons
Isisindo seMpawu eziPhakamileyo
Iibhodi zoKhuseleko lweLab Isimboli sibonisa ubukho beengozi ephezulu yamandla. IDuesentrieb, i-Wikipedia Commons
Uphawu lweRadio Radiation
ULab lweZiko loKhuseleko Lo mqondiso uyayilumkisa nge-radiation laser. I-Spooky, i-Wikipedia Commons
Uphawu oluBalulekileyo oluBlue
Iibhanki zokuLondoloza ukuSebenzisa Sebenzisa uphawu lophawu lokubhenela okwesibhakabhaka ukuze ubonise into ebalulekileyo, kodwa ayingozi. AzaToth, i-Wikipedia Commons
Uphawu oluBalulekileyo oluBomvu
Iibhendi zoLwazi loKhuseleko Sebenzisa uphawu lophawu lokubhenela oluphuzi ukuze ulumkise into ebalulekileyo, enokuthi ibonise ingozi ukuba ingafunyanwa. Bastique, i-Wikipedia Commons
Uphawu oluBomvu olubalulekileyo
Iibhendi zoLondolozo lweLeb Sebenzisa uphawu lophawu lokubhenela obomvu ukubonisa into ebalulekileyo. Bastique, i-Wikipedia Commons
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu Isalathisi silumkisa ngengozi yomlilo. Silsor, i-Wikipedia Commons
Iibhendi zokuSebenza koKhuseleko Sebenzisa le mqondiso ukubonisa ubukho beentlanzi. W! B :, Wikipedia Commons
Unobungozi xa uphawu lweManzi
I-Lab yoLwazi lwezokhuseleko Lo mqondiso ubonisa izinto ezibonisa ingozi xa zichazwe emanzini. Mysid, i-Wikipedia Commons
Uphawu lwe-Orange Biohazard
Iibhodi zoKhuseleko loLebhu Uphawu olu lumkisa ngengozi ye-biohazard okanye ye-biological. Marcin "Sei" Juchniewicz
Iibhodi zoKhuseleko kwiLebhu I-Mobius eluhlaza ngokutsalathisa ngeentoloko isimboli sokubuyisela yonke indawo. I-Antaya, i-Wikipedia Commons
Isayinisi seDayimani seRadio
ULab lweZiko loKhuseleko Lo mqondiso ulumkisa ngengozi yomlilo. rfc1394, i-Wikipedia Commons
Omkhulu uMnu Yuk
Iimpawu zoKhuseleko uMnu Yuk uthetha akukho !. Isibhedlele sabantwana sasePittsburgh
UMnu Yuk uyisimboli yengozi esetyenziswayo e-US ejoliswe ukulumkisa abantwana abancinci.
I-Symbol ye-Magenta yokuqala
Iimpawu zoKhuseleko Isalathiso sokuqala isilumkiso se-radiation senziwa ngo-1946 kwiYunivesithi yaseCalifornia, eBrokeley Radiation Laboratory. Ngokungafani nomnyama wanamhlanje ngesimboli sephuzi, isimboli sokuqala se-radiation sibonisa i-magenta trefoil kwimvelaphi eluhlaza. UGavin C. Stewart, i-Public Domain
Uphawu lokhuseleko lubonisa indawo yokucinywa komlilo. Epop, Creative Commons
Ubhaliso lweBhendi yeBhendi yoBomvu
Lo mqondiso ubonisa indawo yenkqonkqo yefowuni yongxamiseko, ngokuqhelekileyo isetyenziswe kwimeko yomlilo. Epop, i-Wikipedia Commons
IQumrhu eliPhezulu loLimo oluPhezulu okanye uphawu lwe-Evacuation Point
Lo mqondiso ubonisa indawo yendibano engxamisekileyo okanye indawo yokuphucula ngokukhawuleza. Epop, Creative Commons
Uphawu loLwandle oluPhezulu lweNdlela
Lo mqondiso ubonisa ulwalathiso lwendlela yokuphepha okanye imeko yokuphucula. Tobias K., iLayisensi yeCreative Commons
Uphawu lweGreen Radura
Isimboli se-radura sisetyenziselwa ukuchonga ukutya okuye kwaxiliswa e-USA. USDA
Uphawu oluBomvu nolwaBomvu oluphezulu
Lo mqondiso uxwayisa ngengozi ephezulu yamandla. I-BipinSankar, i-Wikipedia yoluntu
Amanqaku aseMerika aseWMD
Ezi ziimpawu ezisetyenziswe yi-US Army ukubonisa izixhobo zokubhubhisa ngobuninzi (WMD). Iimpawu azihambelani ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye. I-Wikimedia Commons, i-Creative Commons License
I-NFPA 704 ipakethi okanye uphawu
Lo ngumzekelo we-NFPA 704. Amagqabha amane ombala wesibonakaliso abonisa iintlobo zeengozi ezivezwe ngezinto eziphathekayo. kwintlalo yoluntu
Indlela yokubala okuthethiweyo okanye umyinge
Imiba yeLungelo lezilwanyana kwi-Travis i-Life and Death's Chimpanzee
Iindidi ze-Bass Lines
Amakati kunye nabantu: Ulwalamano lwe-Commensal Old Age lwe-12 000
Yintoni Yakho (Ilanga) Isayina?